Boqortooyada Sucuudi Carabiya oo Afka furatey. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Boqortooyada Sucuudi Carabiya oo Afka furatey.
Wasiirka Arimaha Dibada Boqortooyada Sucuudi Carababiya Amiir Faisal bin Farhan Al-Saud ayaa ku eedeeyey Iran inay fidno ka wado gobolka, shir jaraaid oo ay si wadajir ah ugu qabteen magaalada Moscow isaga iyo dhigiisa Ruushka, Sergey Lavrov.
Wasiir Feysal Wuxuu intaa ku daray inuu ku booriyay Iran inay xoojiso awooda dadka reer Iran halkii ay maalgelin laheyd maleeshiyaadka si ay u carqaladeeyaan amaanka wadamada deriska ah, sida uu sheegay TV-ga Al-Arabiya.
Taliska Iran waa inuu badalaa xukunkiisa falsafada la xiriirta doorka ay ku leedahay gobolka, ”ayuu yiri, isaga oo intaa ku daray in muwaaddiniinta reer Iiraan ay noqdaan kuwa mudnaanta la siiyo, markii ay taasi dhacdana, waxbaa iska beddelaya gobolka. ayuu hadalkiisasiiraaciyey mar Farxaan.
Wasiirka Sacuudi Carabiya wuxuu kaloo sheegay in Boqortooyada ay riixeyso sidii loo heli lahaa xasilloonida gobolka isaga oo tilmaameyey guushii Boqortooyada ee hirgelinta Heshiiskii Riyadh ee Yemen, waxaase Tehraan ku eedeyey Qalalaase joogta ah oo Gobalka ay kawado.
C/wahaab Aadan C/raxmaan.
Previous articleThai police arrest student after king’s portraits defaced
Next articleThe Value of Content-based Language Training for the
Waxaa Magaalada Muqdosho ka dhacay Banaanbax Cabasho ah oo ay dhigayeen ehelada Cabduqaadir Baariyow oo si sharcidaro ah looga heysto Muddo 30 Sanno...
Dowladda Masar oo ay iskudayaysaa inay xoojiso awooddeeda diblumaasiyadeed...